HTC သည် Edge ပုံစံ terminal အသစ်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။ HTC Edge? | Androidsis
ကျနော်တို့ကသက်သေရှိပါတယ် HTC သည်စင်ကြယ်သော Samsung Edge အယူအဆအတွက် terminal အသစ်တစ်ခုစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်, ။ အဘယ်သူ၏အမည်ရိုးရှင်းစွာသည်အဘယ်မှာရှိတစ် ဦး က terminal ကို HTC Edge သို့မဟုတ်ပါကရရှိနိုင်သည့် HTC Sense စိတ်ကြိုက်အလွှာတွင် Samsung Galaxy S6 Edge နှင့် Edge Plus ၏ကွေးညွှတ်မျက်နှာပြင်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အလွန်အသုံး ၀ င်သောစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့် panel များ၏သဘောတရားကိုလက်ခံနိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဖြစ်လိမ့်မည်အရာအတွက် HTC ပြင်ဆင်နေမည့်ဤစိတ်ကြိုက်အလွှာအသစ် HTC Sense ၅ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစားစေတယ်၎င်းကို HTC Edge အားကိုးကားချက်များဖြင့်ခေါ်ဆိုရန်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ငါတောင်မှအမည်မသိသေးသောကောလာဟလနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ကတည်းကငါကိုးကား၌အဘယျသို့ပြောပါနှင့်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်မဟုတ်သလိုထိုကဲ့သို့သောချိုမြိန်သော Android terminal ရှိလျှင်ငါတို့မသိ။
သေချာတာပေါ့၊ ဒီဟာက HTC စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများထံမှအရေးကြီးသည့်သတင်းကင်းမဲ့နေသည့်နာမကျန်းဖြစ်နေသည့်ကောလာဟလများသာဖြစ်သည် ငါ HTC သည် HTC အားအသစ်သောအရာများစတင်ခြင်းနှင့်အတူ၎င်း၏ကံကောင်းပါစေကိုကြိုးစားပြီးလက်ရှိဆိုးရွားသည့်အခြေအနေကိုလှည့်ပတ်သွားလိမ့်မည်ဟုတောက်ပသောအကြံအစည်အပေါ်လောင်းသည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိ Android စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းနိုင်သည်။
အမှန်တရားမှာ၊ ဤစစ်ထုတ်ထားသောဖန်သားပြင်သည် HTC Sense စိတ်ကြိုက်အလွှာတွင်ထည့်သွင်းထားသောဤလုပ်ဆောင်မှုအသစ်ကိုပြသခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောစိတ်ကူးသည်စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်အသစ်ပေါ်လာတော့မည်ကိုစဉ်းစားရန်သဘာ ၀ ကျသည်။ Android ဆိပ်ကမ်းများရောင်းချခြင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရန်အသားများအားလုံးကိုကင်ပေါ်တွင်ထည့်လိုသော HTC Edge မော်ဒယ်သစ် နှင့်တစ်ချိန်ကမိုဘိုင်းနည်းပညာလောက၌အခြေခံစံနှုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ခြင်းသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကမရှိသေးသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
တဖန်သင်တို့အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းငါတို့သည်အသစ်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေကြရသည် HTC Edge သို့မဟုတ်၎င်းသည် Sense စိတ်ကြိုက်အလွှာတွင်ထည့်သွင်းထားသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံစုံနိုင်ငံစုံ၏မော်ဒယ်များအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်မည့် HTC ၏? HTC Edge အသစ်ရွေးရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အလောင်းအစားလုပ်ပြီးအိပ်မက်သည်အိပ်မက်များသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC သည် Edge ပုံစံ terminal အသစ်ကိုပြင်ဆင်နေသည်။ HTC Edge?
Xiaomi သည် Mi 5C ကို၎င်း၏ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Surge S1 ကိုတင်ဆက်သည်
ဂူဂဲလ်နေအိမ်သည်ယူကေသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်